विश्वसम्पदा भक्तपुरमा सार्कका प्रथम महिला - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / SAARC / विश्वसम्पदा भक्तपुरमा सार्कका प्रथम महिला
विश्वसम्पदा भक्तपुरमा सार्कका प्रथम महिला
By Digital Khabar on November 29, 2014
काठमाडौं-बिहिबार भक्तपुर दरवार क्षेत्र पुगेकी पाकिस्तानी प्रथम महिला बेगम साहिबा राजा भूपतेन्द्र मल्लको शालिकबारे सुन्दै थिइन्। उनले ऐतिहासिक ५५ झ्याले दरवार बनाएका थिए। तीन मिनेट नपुग्दै अचानक शालिककै पूर्व रहेको ठूलो घण्टमा उनका आँखा घुमे।
उनीसँगै नेपाली प्रथम महिला सुजाता कोइराला, माल्दिभ्सकी फतिमा इब्राहिम, लगायत अन्य देशका केही महिला प्रतिनिधिको आँखा शालिकमै थियो। ‘अरु दुइ प्रथम महिलाले मेरै कुरा सुनिरहनुभएको थियो तर मेरो कुरा पुरा हुन नपाउदै साहिबाका आँखा घण्टतिर मोडिए,’ उनीहरुलाई गाइड गरेका पुरातत्व विभागका अधिकृत देवेन्द्र भट्टराइले नागरिकसँग भने, ‘तत्काल उहाँले घण्टको बारेमा सोध्नुभो।’
यो के हो? यसले के काम गर्छ? सबैलाई एकोहोरो दरवारका सम्पदाको विषेशता बताइराएका भट्टराई मुस्कुराउँदै उनलाई जवाफ दिए, ‘हिन्दु र बुद्ध धर्ममा घण्टको महत्व हुन्छ। यो घण्टको सामाजिक र राजनितिक महत्व छ।’
यसपछि भट्टराइले घण्टको बारेमा खुलस्त पारे। खासगरी साहिबाले घण्ट कसरी ठूलो भयो भन्नेमा आश्चार्य व्यक्त गरेको उनले बताए। ‘भक्तपुर, पाटन र काठमाडौं दरवार क्षेत्रको एक मिल्दो विशेषतामध्ये घण्ट एक रहेको मैलै बताइदिए,’ भट्टराइले भने, ‘पछि उहाँहरु सबैले इच्छुकताका साथ सुन्नुभो।’
‘सार्क सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखका प्रथम महिलाहरुको भक्तपुर दरवार क्षेत्र भ्रमणमा यो रमाइलो दृश्य थियो,’ भट्टराई भन्दै थिए। ५५ झ्याले दरवारदेखि सुरु भएको उनीहरुको भ्रमण स्वर्णद्धार, भूपतेन्द्र मल्ल शालिक, घण्ट, बाट राष्ट्रिय कला संग्रालयतिर टोली छिर्योे। उनीहरुको इच्छाअनुसार संग्रालय प्रमुख अरुणा नकर्मीले संग्रालयमा गाइड गर्दै हिडिन्।
यत्तिकैमा माल्दिभ्सकी प्रथम महिला इब्राहिमले यसअघि नसोधेपनि थाङका पेन्टिङमा उनको आँखा तानियो। ‘भीडभाड थियो, मैले संग्रालयमा रहेका वस्तुहरुको बारेमा भन्दै गए, उहाँहरु आश्चार्यसाथ सुन्दै हिड्नुभो,’ नकर्मीले भनिन्।
यत्तिकैमा थाङ्कातिर इंकित गर्दै ‘यो के हो?’ भन्दै इब्राहिमले प्रश्न गरिन्। अरु केही प्रश्न आएन।
नकर्मीले फतिमालाई उत्तर दिइन्, ‘हिन्दु र बौद्ध धर्मको आश्रीत पौभा चित्र हो।’ यतिकैमा प्रथम महिलाको टोली करिब २० मिनेटमा संग्रालय बाहिर निस्कियो। यसपछि सुरु भो, हस्तकला सामाग्री निरिक्षण।
हस्तकाला प्रदर्शन हेरेपछि टोली पशुपति मन्दिर र बत्तला (पार्वती) मन्दिरको बारेमा सुने। उसपछि तौमणी स्वायर टोली हिड्यो। सो क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक पाँचतले न्यातपोल मन्दिर र भैरव मन्दिरको चर्चा अधिकृत भट्टराइले सुरु गरे।
उनले पाँचतले मन्दिर सन् १७०२ मा राजा भूपतिन्द्र मल्लले बनाएको भन्दै थिए। यत्तिकैमा पाकिस्तानी प्रथम महिला साहिबाले सोधिन्, ‘अघि हेरेको भूपतिन्द्रमल्लले नै बनाएको हो, यो पनि?’ देवेन्द्रले हास्दै ‘हो’ उत्तर फर्काए। ‘मैले आधा घण्टा अघि भूपतिन्द्रको शालिक घुमाएको थिए, तर उहाँले यति पहिलाको कुरा सम्झेर सोध्नुभो,’ भट्टराईले सुनाए।
न्यातपोल अगाडी एकैछिन फोटो सेसन भयो। यसपछि पालो भयो कफि खाने। न्यातपोल क्याफेबाठ प्रथम महिलाहरुले बाहिर तौमणी डबलीमा देबी नाँच हेर्दै रमाइलो लिए। हिन्दु भगवान महाकाली, कुमारी र महालक्ष्मीको नाँच नेवारी समुदायको परम्परागत नाच रहेको भट्टराइले बताए।
नेपालकी प्रथम महिला सुजाता कोइरालाले पनि अन्य प्रथम महिलालाई भक्तपुरका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। अन्य प्रथम महिलाहरुले सहरका अन्य क्षेत्रमा पनि घुम्न रुचि देखाएको राससले जनाएको छ। उनीहरुले ‘धेरै रोचक’ मानेको कोइरालाले बताइन्।
भ्रमणमा तीन देशका प्रथम महिला सहित श्रीलङ्काका र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्रीका श्रीमतीहरु पनि सहभागी रहेको परराष्ट्रमन्त्रालयकी सहसचिव अम्बिकादेवी लुइटेलले बताइन्। ‘उहाँहरुले निकै रुचिका साथ भक्तपुर यात्रा गर्नुभो,’ उनले भनिन्। अन्य देशका पाहुँनालाई स्वगत गर्न नेपाली प्रथम महिला कोइराला आधा घण्टा अगाडी भक्तपुर पुगेकी थिइन्।
१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन बिहिबार विहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म प्रथम महिलाहरु निकै रुचिसाथ भक्तपुरमा विताएका थिए।
राष्ट्रपति ओबामा र…
रुसकी प्रथम महिला…
Related Itemsdigital khabarFirst LadyInternationalNationalNepalNewsPoliticsSaarcWorld
← Previous Story काबुलमा बेलायती राजदूतावासको सवारी साधनमा आक्रमण, दुईको मृत्यु
Next Story → नेपाल ‘विश्व पर्यटकको स्वर्ग’